2. Plastic ပလက်ဖောင်း
တင်းကျပ်သော PU အနားကွပ် PP core casters ၏ ၃ တန်းရှေ့
ဆုံလည် PU အနားကွပ် PP core casters ၏ 4. Back အတန်း
ဖုန်မှုန့်ကင်းသော washer & chrome plated fork တို့နှင့် 5.Caster
ပလက်ဖောင်းထရပ်ကားများသည်စက်ရုံများ၊ ဂိုဒေါင်များနှင့်စူပါမားကတ်များတွင်အသုံးများသောကိုင်တွယ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်တင်ကုန်ချကိုင်တွယ်ခြင်းကိုနားလည်ရန်အခြေခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပေါ့ပါးသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။
Hebei Juren Hoisting Machinery Co. , Ltd သည် hoisting tools များကြောင့်ကျော်ကြားသော Hebei ပြည်နယ် Baing City, Qingyuan District, Qingyuan District, Donglv တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၅ နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၎င်းသည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လွှင့်ထူစက်များအဖြစ်နာမည်ကောင်းနှင့်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်သို့တိုးတက်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သံကြိုးလုပ်ကွက်များ၊ လီဗာတုံးများ၊ လက်မောင်းထရပ်ကားများစသည်ဖြင့်လွှင့်ထူသောစက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏ဒီဇိုင်းအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး (သို့) ပုံမှန်မဟုတ်သောလွှင့်တင်စက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတင်းကျပ်သောစက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအရှေ့ဥရောပ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ ဘရာဇီး၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိကစသည့်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသ ၂၀ ကျော်သို့တင်ပို့ခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးသည်ယွမ်သန်း ၁၂၀ အထိရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်လုံခြုံမှုနှင့် ၀ ယ်ယူသူများစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အမြဲဂရုတစိုက်ဂရုစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်ဂျင်နီယာပညာတွင်ထူးချွန်ရန်နှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်အတူဆက်လက်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်ရန်ရည်ရွယ်သောမူဝါဒကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကျေနပ်စေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကမင်းကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းတွေ၊ အရည်အသွေးကောင်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုတွေနဲ့အမြဲကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ်။
RLEBER RUBBER WHEELS များ
သဘာဝ RESIN ဘီးများ
၅” PVC ဘီးများ
Jet 1.5 Ton Chain Hoist, လျှပ်စစ် Lever Hoist, Bannon လျှပ်စစ် hoist, အသေးစားလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကြိုး, Manual Lever Chain Hoist, Lever Puller ဖြစ်သည်,